Sorona Masina ny 20/08/2017 - Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 20/08/2017
ALAHADY FAHA-20 mandavantaona — A
NY OLOMBELONA REHETRA NO KENDREN’ANDRIAMANITRA HIDITRA AO AMIN’NY FANJAKANY
Andriamanitra ô, Ianao nanomana soa tsy hita maso ho an’izay tia Anao, ka alatsaho ao am-ponay ny afom-pitiavana Anao, hitiavanay Anao ao amin’ny zavatra rehetra sy ambonin’ny zavatra rehetra, ka hahazoanay ny soa lavorary nampanantenainao.
Iz. 56, 1. 6-7
Ny zanaky ny vahiny hoentiko eo an-tendrombohitro masina.
Izao no lazain’ny Tompo: Tandremo ny hitsiny ary araho ny rariny, fa efa akaiky ny famonjeko, ary efa hiseho ny fahamarinako. Ary ny hafa firenena izay mifikitra amin’ny Tompo: mba hanompo Azy sy ho tia ny Anarany, ary ho mpanompony; izay rehetra mitandrina ny sabata fa tsy mandika azy, sy miraikitra mafy amin’ny fanekeko, dia hoentiko ao an-tendrombohitro masina, sy hampifaliako ao an-tranoko fivavahana, hankasitrahina eo ambony ôtely ny sorony dorana aman-tsorony: fa ny tranoko hatao hoe: “Trano fivavahana ho an’ny firenena rehetra”.
Sal. 66, 2-3. 5. 6 sy 8.
Fiv.: Hidera Anao ny vahoaka, Andriamanitra, hidera Anao anie ny vahoaka rehetra.
Andriamanitra anie hiantra sy hitso-drano; hampamiratiny amintsika anie ny Tavany: ka ny herinao ho fantatra eran-tany, ho hain’ny firenen-drehetra ny vonjinao!
Hifaly sy hihoby anie ny fokom-pirenena, satria Ianao mitsara ny tany ara-drariny mitsara ny vahoaka amim-pahamarinana, mitondra ny fokom-pirenena eto an-tany.
Rôm 11, 13-15. 29-32
Aminareo Jentily havana no itenenako: amin’ny maha-Apôstôlin’ny Jentily ahy, dia manome voninahitra ny fandraharahana nomena ahy aho, mba hahavelom-pialonana amin’ireo tapako, sy hamonjy ny sasany amin’izy ireo, raha azo atao. Raha ny fanariana azy àry no fampihavanana an’izao tontolo izao, hanao ahoana kosa ny fandraisana azy: tsy ho fitsanganan-ko velona va? Satria tsy misy anenenany ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan’Andriamanitra. Fa ianareo fahiny mba tsy nanaiky an’Andriamanitra ihany, nefa noho ny naneken’izy ireny dia nahazo famindram-po ankehitriny. Toy izany koa izy ireny ankehitriny, tsy manaiky an’Andriamanitra izy, nefa noho ny famindram-po azonareo, dia hahazo famindram-po toraka izany koa. Fa samy nohidian’Andriamanitra tamin’ny tsy fanekena ny olona rehetra, mba samy hamindrany fo avokoa.
Ny ondriko mihaino ny feoko, hoy ny Tompo: Izaho mahalala azy ary izy manaraka Ahy.
Tamin’izany andro izany, i Jesoa dia nankany amin’ny faritanin’i Tira sy i Sidôna. Ary indro nisy vehivavy Kananeanina anankiray nivoaka avy amin’izany tany izany, niantsoantso mafy nanao hoe: “Mamindrà fo amiko, ry Tompo Zanak’i Davida, fa ampijalian’ny demony mafy loatra ny zanako vavy”. Fa tsy namaly azy i Jesoa na dia indraim-bava aza. Dia nanatona niangavy taminy ny mpianany nanao hoe: “Roahy izy, fa mikiakiaka manaraka antsika”. Ary hoy ny navaliny azy: “Tsy nirahina afa-tsy ho an’ny ondry very amin’ny taranak’i Israely Aho”. Fa nanatona ihany ravehivavy ka niankohoka teo anatrehany, ary nanao hoe: “Tompo ô, vonjeo aho!” Nefa novaliany hoe: “Tsy mety raha ny mofon-jaza no alaina ka atsipy ho an’ny amboa”. Ary hoy ravehivavy: “Marina izany, Tompoko, nefa ny amboakely mba mihinana ny sombintsombiny latsaka avy amin’ny latabatry ny tompony ihany”. Dia namaly i Jesoa ka nanao taminy hoe: “Ravehivavy, lehibe ny finoanao, aoka ho tanteraka aminao araka izay irinao”. Dia sitrana tamin’izany ora izany ihany ny zanany vavy.
Ry kristianina havana, na i Masindahy Paoly miferinaina mahita ireo Jody iray ra aminy tafasaraka amin’i Kristy, na i Jesoa nanaiky ny fangatahan’ilay vahiny Kananeanina, dia samy mampahatsiaro antsika fa ny olona rehetra no tokony hotaomintsika ho tonga eo amin’Andriamanitra; koa andeha isika hiara-mivavaka ho an’ny firenena rehetra mba hankanesany eo amin’ny Tompo.
* Hatramin’ny Kônsily Vatikana faharoa teo ny Eglizy dia miezaka manokana hanatona ny olona rehetra; koa mangataha mba hifarimbona aminy ny Katôlika rehetra.
* Mijaly ny tsy mpino sy ny tsy mahalala an’Andriamanitra, fa tsy mba afaka mivavaka hananany hery sy fanantenana; koa mangataha mba hotanterahin’Andriamanitra izay faniriana tsara tsy hainy lazaina.
* Fomba itenenan’Andriamanitra amintsika ny zava-mitranga; koa diniho izay henontsika tamin’ny radiô, na novakintsika tamin’ny gazety tamin’ity herinandro ity, ary angataho mba ho tonga fanantenana sy fahasambarana.
* Tsy azoazon’ny kristianina sasany ny Jody, nefa razantsika amin’ny finoana, ary i Jesoa aza dia Jody; koa mivavaha ho azy ary miaraha aminy mivavaka amin’ilay Ray iombonana.
* Atambaro ny vavaka ataontsika izao hiakatra any amin’Andriamanitra, miaraka amin’ny an’ireo rehetra miangona anio alahady, na kristianina na tsy kristianina, hiara-mangataka mba hinoan’ny olona rehetra an’i Jesoa Kristy Zanak’Andriamanitra.
Ry Jesoa Kristy Tompo ô, hitanao ny fiezahan’ny Eglizy, maniry hiasa amin’ny olombelona rehetra sy hanasoa azy rehetra sahala amin’ny nataonao; koa ampio ny Fanahinao izy fa sarotra adidy tontosaina.
Amin’ny alalan’i Kristy Tomponay. Amen
Izaho no Mofo velona nidina avy any an-danitra, hoy ny Tompo, raha misy mihinana izany Mofo izany, dia ho velona mandrakizay.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.2714 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org